Android အတွက် QR & ဘားကုတ်ဒေတာ Matrix PDF417 စကင်နာ၊ APK ဒေါင်းလုပ်ဖတ်ရန်
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » QR & ဘားကုဒ်မှာ Data Matrix PDF417 Scanner, စာဖတ်သူကို
QR & ဘားကုဒ်မှာ Data Matrix PDF417 Scanner, စာဖတ်သူကို APK ကို
သငျသညျထိုကဲ့သို့သော Ean-417, Ean-13, UPC-A, UPC-E, Code ကို-8, Code ကို-39, Code- အဖြစ်အားလုံးအဓိကဘားကုဒ်ကိုပုံစံများကိုပံ့ပိုးသောတဦးတည်းဖို့အတွက် QR & ဘားကုဒ် PDF93 စာဖတ်သူကိုကင်နာအားလုံးတစ်ဦးအစွမ်းထက်ရှာနေနေတယ်ဆိုရင် 128, ITF, Codabar, QR Code ကို, ဒေတာများ Matrix, PDF ကို-417, AZTEC ဖို့အတွက် QR Code ကို Reader ကိုဖွစျ၏။
QR & ဘားကုဒ် PDF417 Scanner တိုင်းက Android device ကိုများအတွက်မရှိမဖြစ် App ဖြစ်ပါတယ်။
QR & ဘားကုဒ်မှာ Data Matrix စကင်နာသင်သည်ကင်မရာအားဖြင့် QR ကုဒ်ကိုသို့မဟုတ်ဘားကုဒ်စောင့်ကြည့်ပြီးတော့ app ကိုဖွင့်, သုံးစွဲဖို့အလွန်လွယ်ကူသည်။ သငျသညျ QR ကုဒ်ကိုသို့မဟုတ်ဘားကုဒ်ကို၏သတင်းအချက်အလက်မြင်လိမ့်မည်။
QR & ဘားကုဒ် Code ကို Reader ကိုတစ်ခုတည်းသော QR / ဘားကုဒ်ကိုစာဖတ်သူကို / သငျသညျအစဉျအမွဲလိုအပ်ပါလိမ့်မည်ကင်နာပါ!
QR & ဘားကုဒ် PDF417 Scanner / QR ကုဒ်ကိုစာဖတ်သူကိုသုံးစွဲဖို့အလွန်လွယ်ကူသည်, ရိုးရိုးသငျသညျ scan လုပ်ဖို့နဲ့ app ကအလိုအလျောက် detect နှင့်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးပါလိမ့်မယ်လိုခငျြ QR သို့မဟုတ်ဘားကုဒ်ကိုထောက်ပြ။ မည်သည့်ခလုတ်နှိပ်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူး။
အဆိုပါမြန်ဆန်ထိရောက်နှင့်တိကျမှန်ကန်ဖို့အတွက် QR, ဘားကုဒ်, PDF417 Scanner microsecond အတွင်းမည်သည့်ကုဒ်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးရန်သင့်အားနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာ Runtime Scan ကိုအင်္ဂါရပ်များတစ်ကြိမ်မျိုးစုံ QR, ဘားကုဒ်ကို, PDF417 codes တွေကို detect နိုင်ပါတယ်ပါပဲ။
QR Scanner စကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့ features တွေနှစ်မျိုးနှင့်အတူ scan အစဉ်အဆက်ပထမဦးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခုမှာလက်ငင်း Scan ကိုတစ်ခုဖြစ်သည်နှင့်အခြား Runtime Scan ကိုဖြစ်ပါတယ်။
Runtime Scan ကိုမျက်နှာပြင်အပြေးပေါ်မှာရှိသမျှ data တွေကိုပြသနေစဉ်လက်ငင်း QR & ဘားကုဒ်စကင်နာအလိုအလြောကျ, QR & ဘားကုဒ် Code ကိုစုံစမ်းသိရှိလာပါတယ်။ သငျသညျ QR & ဘားကုဒ်အပေါ်ကလစ်နှိပ်ခြင်းဖြင့်အချက်အလက်အားလုံးကိုရနိုင်။
အထူးလျှော့စျေးရွေးနှုတ်တော်မူခြင်းနှင့်အချို့ပိုက်ဆံကယ်ဖို့ကူပွန် / ကူပွန် codes တွေကို scan မှ QR & ဘားကုဒ် Ean-13 Scanner သုံးစွဲဖို့က၎င်း၏အကောင်းဆုံး app ကို။
သင်ပင်ဖို့အတွက် QR Code ကို Reader ကိုနှင့်အတူပိုက်ဆံကိုကယျတငျနိုငျ! ဘယ်လိုလဲ? အထူးလျှော့စျေးခံယူခြင်းနှင့်ပိုက်ဆံကယ်ဖို့ကူပွန် codes တွေကို (ကူပွန်) scan မှဖို့အတွက် QR Code ကို Reader ကိုအသုံးပြုပါ။ QR Code ကို Reader ကိုသင်တို့ကိုလည်းစျေးဆိုင်များတွင်ကုန်ပစ္စည်းဘားကုဒ်များ scan နဲ့ပိုက်ဆံကယ်ဖို့အွန်လိုင်းစျေးနှုန်းများနှင့်အတူစျေးနှုန်းတွေကိုနှိုင်းယှဉ်ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။
မိုဘိုင်း Vision ၏ API ကို
ကျနော်တို့အစာရှောင်ခြင်းနှင့်တိကျမှုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့များအတွက်နောက်ဆုံးရမိုဘိုင်း Vision ၏ API ကိုအသုံးပြုသည်။ အဆိုပါဘားကုဒ် API ကိုမဆိုတိမ်းညွတ်အတွက်, ကိရိယာပေါ်, Real-time အတွက်ဘားကုဒ်များကို detect ။ ဒါဟာအစတစ်ကြိမ်မှာမျိုးစုံဘားကုဒ်များ detect နိုင်ပါတယ်။
Grato QR & ဘားကုဒ် Scanner 1D နှင့် 2D အပါအဝင် Code ကိုအမျိုးအစားအားလုံးကို support လုပ်ပါတယ်။
1D QR & ဘားကုဒ်ကို PDF417 ပါဝင်သည်:
★ Code ကို-39
★ Code ကို-93
★ Code ကို-128
2D QR & ဘားကုဒ်ကို PDF417 ပါဝင်သည်:
★ဖို့အတွက် QR Code ကို
★မှာ Data Matrix
★ PDF ကို-417
Grato QR & ဘားကုဒ်စကင်နာကိုအလိုအလျောက် parses နှင့်ဖို့အတွက် QR Code, ဒေတာများ Matrix, PDF ကို-417 နှင့် Aztec တန်ဖိုးများကုဒ်။
★ URL ကို QR ကုဒ်ကို
(စသည်တို့ကို vCard) ★ဆက်သွယ်ရန်သတင်းအချက်အလက် QR ကုဒ်ကို
★ပြက္ခဒိန်ဖြစ်ရပ် QR ကုဒ်ကို
★အီးမေးလ် QR ကုဒ်ကို
★ဖုန်း QR ကုဒ်ကို
★ SMS ကို QR ကုဒ်ကို
★ ISBN QR ကုဒ်ကို
★ Wi-Fi QR ကုဒ်ကို
★ Geo-တည်နေရာ (လတ္တီနှင့်လောင်ဂျီတွဒ်) QR ကုဒ်ကို
★ AAMVA ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် / ID ကို QR ကုဒ်ကို
App ကို Features:
★မဆို QR ကုဒ်ကိုသို့မဟုတ်ဘားကုဒ်စကင်ဖတ်
မှောင်မိုက်၌ scan လုပ်ဖို့★ Flash ကိုအလင်းထောက်ခံမှု
သိမ်းဆည်းဖိုင်မှတ်တမ်းထံမှ★ဒီကုဒ်ဒါ QR & ဘားကုဒ်
★ကြည့်ရှုပါကသင်၏အတိတ်သမိုင်း၌ QR codes တွေကို scan ဖတ်
QR Code ကို Reader ကိုရှိပါတယ်:
အနိမ့်မြင်ကွင်းထဲမှာ Scan ဖတ်ဘို့★ဖလက်ရှမီး
★ Scan ကိုသမိုင်း
ဒီ app ကိုအပြည့်အဝထောက်ခံတဲ့ဗားရှင်းဖြစ်ပါသည်:
ထိရောက်ဆန်းစစ်မှုနှင့်ထည့်သွင်း AZTEC ထောက်ခံမှုနှင့်အတူ Pdf417 ထောက်လှမ်း
QR & ဘားကုဒ်မှာ Data Matrix PDF417 Scanner, စာဖတ်သူကို
4.44 ကို MB
Flado Apps ကပ lnc ။